Ny porofon'ny fanaovana vaksiny amin'ny dia dia azo heverina ho fanavakavahana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny porofon'ny fanaovana vaksiny amin'ny dia dia azo heverina ho fanavakavahana
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nampitandrina ny mpitondra eran-tany fa izay fepetra takina amin'ny porofo fanaovana vaksiny amin'ny dia lavitra, izay tsy manisy fiheverana ny fidirana sy fizarana vaksinin'ny COVID-19 manerantany, dia azo heverina ho manavakavaka.
Ny fiantohana ny tsy fitoviana amin'ny fizarana vaksininy dia tsy manakana ny famerenana indray ny fizahan-tany sy ny serivisy mifandraika amin'izany.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia nanentana ny mpikambana mba handinika izay rehetra mety ho fiantraikan'ny pasipaoro fanaovana vaksinina, indrindra amin'ireo firenena miankina amin'ny fizahan-tany.
Tsy dia misy toerana mifanaraka amin'ny pasipaoro niomerika sy ny paikadim-biolojika hafa raha toa ka taraiky be any aoriana ny firenena sy ny faritra sasany.
Ny Minisitra dia naneho ny heviny momba ny porofon'ny fanaovana vaksiny ho an'ny dia amin'ny asany amin'ny maha-Filohan'ny Organisation of the States of American States (OAS), ny Komite Inter-American momba ny fizahan-tany (CITUR) vondrona miasa 4, izay novolavolaina mba hamoronana drafitra asa fanarenana ho an'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sy sambo.
Raha niresaka nandritra ny fivoriana virtoaly fahatelo an'ny vondrona ny minisitra Bartlett dia nilaza hoe: "Ny fitantanana mahomby amin'ny COVID-19 sy ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany dia mitaky ezaka iraisana sy iarahan'ny fanjakana mpikambana rehetra. Mila miara-mandroso amin'ity isika raha tsy izany dia mety hiharatsy ny toe-javatra any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana, izay tsy azo ihodivirana fa hiparitaka amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy sy any an-kafa. ”
“Ity no dingana voalohany hiantohana fa ny tsy fitoviana amin'ny fizarana vaksininy dia tsy manakana ny fanombohan'ny fizahan-tany sy serivisy mifandraika amin'izany. Izay fepetra takiana amin'ny porofo fanaovana vaksiny amin'ny dia izay tsy manisy fiheverana izany zava-misy izany dia azo heverina ho fanavakavahana, "hoy izy nanampy.
Nanentana ny mpikambana izy handinika ny fiantraikany rehetra mety hananan'ny pasipaoro vaksinina, indrindra amin'ireo firenena miankina amin'ny fizahan-tany. Noho izany dia ilaina ny maha-feo mafy an'i Amerika amin'ny fampidirana ireo tolo-kevitra momba ny fanarenana izay mety ho an'ny faritra.
“Tsy dia misy toerana mifanaraka amin'ny pasipaoro niomerika sy ny paikadim-pahadiovana biolojika hafa rehefa misy firenena sy faritra tara tara ao amin'ny rafitry ny valiny momba ny fahasalamana, ao anatin'izany ny fizotran'ny fanaovana vaksiny. Raha maharitra manolo-tena tsy hamela olona any aoriana isika, dia tsara toerana kokoa handroso lavitra, "hoy ny minisitra.
Nangataka ihany koa i Bartlett ho an'ny fandinihana haingana sy ny fizotran'ny fankatoavana hanamorana ny vaksiny azo antoka sy mahomby kokoa. Nilaza izy fa "misy ny tatitra momba ny vaksinim-bidy omena izay tsy neken'ny besinimaro fankatoavana ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia manana andraikitra raisina ho toy ny fenitra manerantany sy fametrahana maso ivoho manokan'i ONU momba ny raharaham-bahoaka."
Araka ny filazan'ny CITUR, ny tanjon'ny fivoriana manokana dia ny hanome toerana iray hiadian-kevitra momba ireo masontsivana ilaina amin'ny famerenana ny hetsika amin'ny ny sehatry ny fizahantany any amin'ny faritra. Ny tanjon'ny fivoriana dia ny hiasa amin'ny fananganana marimaritra iraisana momba ny fandrindrana ny hetsika eo amin'ny firenena mba hisian'ny fahatokisan'ny mpandeha, mba hiantohana ny sehatry ny fizahan-tany any Amerika hiverina farafahakeliny amin'ny làlan'ny COVID-19.
Ny valin'ny vondrona miasa dia hatolotra ho amin'ny fandinihana ny Kongresin'ny Minisitra sy ny manampahefana ambaratonga ambony an'ny fizahantany XXV amin'ny volana oktobra 2021.
Fizahan-tany any Hawaii: 82 isan-jaton'ny mpitsidika no faly amin'ny diany